५ बर्षमा समृद्ध अर्घाखाँची बनाई शहर र तराईमा बसाई सरेकालाई पुनः जिल्ला फर्काउनेछु आचार्य (२०७४ म‌सिर १८, सोमवार)
अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालीका वार्ड नं.१० मा २०२५ सालमा जन्मनु भएका चेतनारायण आचार्य जिल्लामा निक्कै ईमान्दार,सरल र स्वच्छ छविको लोकप्रिय नेताको रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । विद्यार्थी अबस्था देखी नै राजनितिमा सक्रिय रही पञ्चायती व्यबस्थाको बिरुद्ध संघर्ष गर्दै आउनु भएका आचार्य अनेरास्वबियू बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष लगायतका पदको जिम्मेवारी समाल्दै ४ कार्यकाल सम्म नेकपा एमालेको सचिब र अध्यक्ष रही पार्टी प्रमुखको रुपमा कुसलता पूर्वक नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ । क्यान्सर,मृगौला,कलेजो,मधुमेह लगायतका निक्कै घातक रोगहरुको सिकार भई नयाँ जिवन पाएका आचार्य संयुक्त बामगठबन्धनको तर्फबाट अर्घाखाँची जिल्ला क्षेत्र नं.१ प्रदेश सभाको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । ५ बर्षमा समृद्ध अर्घाखाँची बनाई शहर र तराईमा बसाई सरेकालाई पुनः जिल्ला फर्काउने निक्कै महत्वाकांक्षी योजनाका साथ चुनामी मैदानमा उत्तीनुभएका उहाँ जनताको सेवाको लागि जनताकै मायाँले बाँचेको बताउनु हुन्छ । नेता आचार्य सँग संवाददाता शोभाखर पन्थीले आसन्न निर्वाचनको बिषय लाई लिएर नर्गुभएको कुराकानीको संपादित अंश:-
आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपाली जनताको ६ दशक लामो आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्ने चाहना पूरा भएको छ । जन निर्मित संविधान कार्यान्वयनको क्रममा हुन लागेको यो निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व छ । निर्वाचन पछि नेकपा एमालको नेतृत्वमा निर्माण हुने वामपन्थीहरुको सरकारले जनताका अधिकार संस्थागत गर्नुका साथै राजनीतिक स्थिरता, दिगो विकास र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने छ । त्यसैले यो चुनावलाई निक्कै महत्वका साथ लिएको छु ।
निर्वाचन पछि बामपन्थी नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने आधार के छ ?
निर्वाचन पछि नेकपा एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने आधार भनेको नेपाली जनताले बाम गठबन्धन प्रति गरेको विश्वास, माया र सद्भाव हो । जनता सधैं अग्रगमनको पक्षमा हुन्छन् ।
नेपाली जनताले राष्ट्रिय अखण्डता, स्थायी सरकार, दिगो विकास र समृद्धि चाहेका छन् । त्यो कुरा कम्युनिष्ट पार्टीबाट मात्र सम्भब छ । त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरुलाई बहुमत मात्र होईन दुई तिहाई बहुमत दिएर जनताले विजयी बनाउने छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
सबै दलहरुले चुनावमा यो गर्छौ र त्यो गर्छौ भन्छन् तर चुनाव पछि जनता प्रति उत्तरदायी भएको पाइँदैन नी?
अरु दलले के गरे के गरेनन् हामीले जवाफ दिने कुरा भएन तर नेकपा एमाले र वामपन्थी गठबन्धनको कुरा छ यो मूलुकमा नेपाली जनतालाई वास्तविक नागरिक भएर बाँच्ने र सरकारले जनतालाई केही गर्न सक्छ भन्ने कुराको सानो शुरुवात गर्ने पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो । एमालेले सबै खाले राजनैतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो , देशी विदेशी हस्तक्षेपका वाबजुद प्रमुख दलहरु बीच समन्वय गरी चट्टानी अडानका साथ जनपक्षिय संविधान जारी गर्न सक्यो । यसका अतिरिक्त छाेंटो अबधिमा सरकार सञ्चालन गरी समाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण र ग्रामिण विकासको आधार खडा ग¥यो । म यहाँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत नेपाली जनतालाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु नेकपा एमाले जे वोल्छ त्यो गर्छ, जे गर्छ त्यो मात्र वोल्छ । जहाँसम्म यहाँले जनता प्रतिको उत्तरदायित्वको कुरा गर्नु भएको छ, हामी हिंजो जनप्रतिनिधि नभएको वेलामा पनि जनता प्रति उत्तरदायी थियौं र आफूलाई जनसेवामा समर्पित गरेका थियौं । आज पनि जनताको बीचमै छौं र भावि जीवन पनि जनताकै सेवामा समर्पित गर्ने छौं ।
वाम गठबन्धनलाई जनताले किन मतदान गर्ने? मूर्त रुपमा बताई दिनुहोस् न ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा वहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र समाजवाद उन्मूख समाजिक, आर्थिक रुपान्तरण सफल पार्न, आर्थिक बिकास गरी सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न, रोजगारी र उच्च जीवनस्तर हासिल गर्न, जनताको आशा र आकांक्षालाई पूरागर्नको लागि वामपन्थी सरकारबाट मात्रै सम्भव छ । अतः हामी आसावादी छौं की७० प्रतिशत बढि मतदाताले गठबन्धनका उम्मेदवारहरु लाई मतदान गरी भारी मतले विजयी गराउनु हुने छ ।
नागरिक सुरक्षाको सवालमा एमाले नेतृत्वको वाम गठनबन्धनको भावि कार्यक्रम के छ ?
नेकपा एमाले एउटा यस्तो पार्टी हो जसले सबै नेपालीहरु सुखी, खुशी र समृद्ध भएको देख्न चाहन्छ । जो नागरिक काम गर्न सक्छन् ती नागरिकका लागि हामी रोजगारीका अवसरहरुको ग्यारेन्टी गर्नेर्छांै। जसले आफ्नो लागि केही गर्न सक्दैनन् तिनीहरुको पालन, पोषणको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामी वृद्ध, असहाय,अशक्त, अपाङ्ग र दिनदुःखीहरुको जीवन यापनको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । तथापी हालको लागि एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले मासिक सुरक्षा भत्ता तत्काल ५ हजार पु¥याउने, जेष्ठ नागरिकको औंषधि उपचार निःशुल्क गर्ने,बृद्ध, असहाय,अशक्त र अपाङ्गहरुलाई सबै खाले यातायातका साधनमा छुट दिने लगायतका जनमुखी कार्यक्रम मार्फत नागरिक सुरक्षा ग्यारेन्टीको शुरुवात गर्ने छ ।
वाम गठबन्धन सरकारबाट ग्रामिण क्षेत्रमा बस्ने गरीव दुःखी जनताले के पाउँछन् ?
हाम्रो राजनीतिकको मूख्य उद्देश्य भनेको संसार भरिका गरिव तथा शोषित वर्गको मुक्ति हो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा ग्रामिण क्षेत्रका गरिव तथा बिपन्न जनसमुदाय पर्दछन् । हामीले राज्यको सबै संयन्त्र प्रयोग गरी उनिहरुको जीवनस्तर माथि उठाउने छौं । हामी गाउँमा विकासका पूर्वाधारहरु खडा गरी जनतालाई उत्पादनमूलक काममा जोडी स्वरोजगार बनाउने छौं । त्यसको लागि गाउँ टोलमा सहकारी, घरघरमा रोजगारीको अभियानलाई तिव्र पारिने छ ।
अव जिल्ला तिर फर्कौ, जिल्लाको समग्र विकास प्रति यहाँको दृष्टिकोण के छ ?
हामी अर्घाखाँची जिल्लालाई मूलुककै नमूना र समृद्ध जिल्ला बनाउन चाहन्छौं । त्यसको लागि जिल्लाको सबै वार्ड सम्म मोटर बाटो पु-याएका छौं । हामी बाटोको स्तरउन्नती गरी पिच गर्ने सोंचमा छौं ।लामो समय देखि जिल्लामा बिद्यमान पिउने पानीको समस्या समाधनको लागि पम्पिङ्गको माध्यमबाट घर घरमा पानी पु-याईने छ । प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा कृषि, भेटेनरी र ईन्जिनियरिङ्ग पढाई हुने प्राविधिक शिक्षालय तथा सबै पालिकामा विशेषज्ञ सहितको कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल संचालन गरीने छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, वाख्रापालन, कुकुरापान, मौरीपालन, गाई-भैसीपालन,मत्यपालन लाई व्यवसायीकरण गरिने छ ।
नौमुरेमा जिल्लाका बासिन्दाको सेयर रकमबाट जलविद्युत उत्पादन गरी त्यसको पानी बाट सिंचाई गर्ने प्रबन्ध मिलाईने छ । अन्य खोलाहरुमा स-साना लघु जलविद्युत उत्पादन गरीने छ । कागती, सुन्तला, अलैची, कफी,अदुवाको व्यबसायीक खेतीगरी उचित मूल्यमा बजार र बिक्रिवितरणको ग्यारेन्टी गरीने छ । प्रत्येक वार्डमा खेलमैदान निर्माण गर्ने, पालिका स्तरमा एउटा एउटा १ हजार सम्म क्षमताको सभाहल बनाउने, विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र तथा बालमैत्री बनाउने हाम्रो सोंच छ ।
हामी प्रत्येक वार्डमा एउटा मा.वि. , स्वास्थ्य चौकी ,कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । जिल्लामा एउटाबिषेशज्ञ सहितको अत्याधुनिक कम्तीमा ५० शैयाको अस्पताल निर्माण गरीने छ जसबाट गुल्मी र प्यूठानका स्थानीय बासीन्दाहरुले समेत लाभ उठाउन पाउने छन् ।त्यसका अतिरिक्त जिल्लामा पर्यटन उद्योगको राम्रो संभावना भएकाले सुपादेऊराली मन्दिर, अर्घा भगवती मन्दिर, उलुक छत्रमहाराजको मन्दिर, जालकाँडा लेक, वल्कोट पौवा, भाले ओडार धारापानी, पकले वगंैचा, मालारानी, नृृसिंहस्थान, धैरेनी दरवार, पाणिनी तपोभूमि, डमरुदह, दुर्वासेश्वर गुफा, मनचिन्तेपानी, सिमेदेउराली, भूमेकास्थान, ढावर खोला झरना, सिद्धबावा स्थान, सिद्धेश्वर मन्दिर लगायतका ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरी देश भित्र र बाहिरका हजारौं पर्यटक भित्राई मनग्य आम्दानी गरिने छ । त्यसको लागि पर्यटकीय स्थलको पुनः निर्माण गर्नुका साथै व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरिने छ ।
जिल्लामा धेरै नेता र उम्मेदवार छन् तर व्यक्तिगत रुपमा तपाईलाई नै जनताले किन रोज्ने ?
मलाई जनताले रोज्ने भनेको मुख्य आधारमा मेरो पार्टीले लिएको निति, सिद्धान्त,विचार र धारणा स्पष्ट छ म एउटा पार्टीको असल सिपाई हुँ ,त्यसैले जनता मेरो पक्षमा छन् । अर्को कुरा मैले आज सम्म कामगर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थलाई हेरेर काम गरेको छैन । यहाँका श्रमजिवी वर्गले उठाएका आवाजलाई अग्रमोर्चामा उभिएर बुलन्द पार्ने काम गरेको छु । चाहे चुनढुङ्गा उत्खनन् विरुद्धको संघर्ष होस् यात ५ नम्वर प्रदेश टुक्रयाउनबाट बचाउने संघर्ष होस् । सबैखाले जनआवाजलाई मैले जस्तो सुकै चुनौती मोलेर पनि पार गरेकै छु । मैले ५ बर्षको मेरो कार्यकालमा जिल्लाका बासीन्दा बसाई सरेर तराई र शहर जानेहोइन तराई र शहरका मानिस अर्घाखाँची बसाई सरेर आउने स्थितीको सिर्जना गर्नेगरी जिल्ला लाई बिकास गर्ने योजना बनाएको छु ।
यहाँले निकै ठूला– ठूला रोग पार गरि सक्नु भएको छ ? विरामी हुँदाको अवस्थामा यो दिन आउला भनि कल्पना गर्नु भएको थियो ?
तपाईले भने जस्तै म क्यान्सर, मृगौला, कलेजो,मधुमेह, लगायतका रोगहरुको सिकार भएको हुँ । मेरो रोगबारे थाहा पाएका र मलाई देखेका कसैले पनि बाँच्छ भनेका थिएनन् तर जिल्लावासी दाजुभाई दिदीवहिनीको माया ममता र स्नेहका कारणले म बाँचे । म विरामी पर्दा म भन्दा बढी दुःखी जिल्लावासी हुनुभएको थियो । यहाँका गरिव शोषित जनताले तपाई बाँच्नु पर्छ हामी जे गर्न पनि तयार छौं भनि निकै चिन्ता गर्नुका साथै मलाई बाँच्नको लागि हौसला दिनुभयो ।
जनता हलका गोरु, दुहुनो भैंसी ,लगाएका गहना बेचेर मेरो उपचार गर्न तयार भए । मेरो निम्ति दर्जनौ साथीहरु मृगौला दिन तयार थिए । उहाँहरु सबैको आर्शिवादले म बाँचे । मलाई मर्ने बाँच्ने कुरा सँग कुनै मतलव थिएन, तर एउटै कुराको धोका थियो कि जिल्लाका दिन दुःखी र गरिव जनताको मुहारमा खुशी ल्याउने मेरो बाल्यकाल देखीको सपना पुरागर्न पाउँछुकी पाउँदैन भन्ने ।
अब त्यसो भए तपाइँको सपना साकार हुने भयो हैन ?
हो म बाँचेकै जनताको लागि हो । मैले आफूलाई देशको एउटा नमूना नेता बनेर देखाउन चाहन्छु । मलाई व्यक्तिगत रुपमा कुनै लाभ र फाईदा लिनु छैन। अहिले नेता र राजनीति प्रति जनताको जुन किसिमको शंका र अविश्वास छ म त्यसलाई मेटाउन चाहन्छु । राजनीती जनता र देशको लागि गरिंदो रहेछ भन्ने कुराको छाप म आम जनता बीच छोड्न चाहन्छु । मैले तपाईको यो लोकप्रिय संचार माध्यम मार्फत यति भन्न चाहन्छुकी म जती दिन बाँच्छु जनताको सेवामै समर्पित हुने छु । जनतानै मेरा ईश्वर हुन् उनैलाई ईश्वर सम्झेर निरन्तर सेवामा समर्पित हुने छु ।
समय अत्यन्तै छाेंटो छ । स्वास्थ्यको कारणले म तिव्र ईच्छा हुँदा हुँदै पनि जिल्लावासी आम दाजुभाई दिदीवहिनीको घर र टोलमा आउन सक्ने अवस्था छैन । यहाँहरु बीच निर्वाचन भन्दा पहिले मतमाग्न आउन नपाए पनि चुनाव पछि यहाँहरुको दुःख सुखको साथी बन्न आउने छु ।
न्याय प्रेमी जिल्लावासीहरुले म लगायत सिङ्गो वामगठबन्धनको टिमलाई भारी मतले विजयी गराउनु हुने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
आशा छ मंसिरको अन्तिम सातामा बन्ने नेकपा एमाले नेतृत्वको केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारले आम नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीको मुहारमा खुशी ल्याउने छ ।